Google Ads Audit : Fumana uHlaziyo lweeNtengiso zikaGoogle simahla
Fumana okokugqibela ukuphuma kwimikhankaso ads Clever Google Ads Audit
Yandisa intengiso yakho Google Ads ukusebenza kancinci.
Google Ads lwam Google Ads simahla ngoku
Google Ads amaphulo akho Google Ads ngomzuzwana nje.
Ngokuqhwanyaza kweliso. Clever loPhicotho-zincwadi Google Ads kwimikhankaso yakho yeNtengiso Google Ads . Ngoku ukuba unendawo yokuqala, setha injongo.
Ulwazi oludingayo. Nokuba ukusebenzisa njani na.
Clever Audit ucebisa ukuba kuphuculwe intsebenzo yemikhankaso Google Ads ngokusebenzisa iingcebiso ezilungele ukusetyenziswa kunye neengcebiso. Ezi ngcebiso zilungelelaniswe ngokwempembelelo ezinokubakho ekusebenzeni kwakho.
Sebenzisa uphuculo e impompo enye.
Clever Audit yenzelwe ngokukodwa ukuze umntu ngamnye asebenzise iingcebiso onomdla kuzo. Faka kuphela ezo uzifunayo. Ngokucofa kanye.
Phucula imikhankaso yakho. Zibekele usukelo ezintsha.
Thatha enifunda yakho Google Ads kwiz- zonke ngoku uze ubone oko Clever tips Audit kukunceda ukuphucula ukusebenza kwakho. Ude ufikelele kwinjongo yakho.
Google Ads amaphulo akho Google Ads naphina.
Sebenzisa Clever Audit eofisini, ekuhambeni, okanye elwandle. Olu Google Ads luyilelwe ukubonisa kakuhle kwizixhobo eziselfowuni kunye neetafile. Ngoku ungaphucula Google Ads ngomnwe wakho.
Ukucaca imikhankaso yakho uze ukhule iinzuzo zakho.
Nje ukuba ufikelele kwimikhankaso Google Ads , lixesha lokulinganisa, ukukhula kunye nokwenza eminye imikhankaso yokufikelela kubaphulaphuli abatsha. Konke kuphantsi kolawulo Clever Audit.
osemqoka wethu osenyongweni? abasebenzisi bethu.
Clever Ads , akukho nto ibalulekileyo kuthi ngaphezu kwabasebenzisi bethu kunye nabathengi. Bona ukuba bathini:
"Esi sixhobo Google Ads Audit kulula ukusiqonda nokusebenzisa. Kwakhona, ndingasebenzisa utshintsho ngqo kwideshibhodi elindigcina iiyure ezininzi zomsebenzi. Iphucule i-ROAS yam ngokucacileyo!"
"Ndineshishini elincinci lempahla esixekweni sam, kwaye intengiso zam Google Ads zentengiso Google Ads ngokukodwa okoko ndizilungisile Clever Ads . Ngoku ndiyazi ukuba yintoni engasebenziyo kwisicwangciso sam Google Ads kwaye ndinokuthatha inyathelo ngokulula."
"Clever Ads zihlalutye amaphulo am Google Ads kwangoko nangasimahla! Into endiyithandayo kakhulu kukuba ndinokumisela ngokulula ukuba zeziphi iintengiso ezinenzuzo ngakumbi, indivumela ukuba ndilawule ngcono umvuzo wam."
Qalisa ukulungisa imikhankaso yakho Google Ads
Fumana uphicotho FREE ngoku
Sinomdla lwakho ukhuseleko data. Hlola yethu umthetho wabucala.
Okungakumbi malunga Clever Ads
Funda ngakumbi ngesixhobo esiza kukunceda Google Ads amaphulo akho Google Ads
Google Ads Audit oluhlaziyiweyo olwenziwe Clever Ads ziya kukubonisa ukuba ume phi kwaye ukude kangakanani ekubeni nephulo leNtengiso zikaGoogle. Siza kwenza ngokukhawuleza uhlalutyo olupheleleyo lweentengiso zikaGoogle malunga nemikhankaso yakho, kwaye sikuxelele into ekufuneka uyiphucule ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Konga ixesha nemali
Uphicotho-zincwadi Clever Ads lujolise ekuncedeni ukuba wonge imali ngokukwazisa xa uchitha imali eninzi kumagama aphambili, ujoliso lwakho alulungiswanga, amanqaku akho omgangatho awalunganga, okanye ukulandela umkhondo wakho akusebenzi phakathi kweminye imiba emininzi.
Iya kukunceda ukuba uchaze amathuba kwaye ucebise ngokongeza amagama aphambili aguqula phezulu, ukuphucula ukubekwa kwakho, ukwenza iintlobo zephulo elitsha, okanye ugqibe ads zakho ngolwandiso olungaphezulu. Yeka ukuchitha iiyure zexesha lakho uphonononge amaphulo akho kunye namaqela entengiso ukufumana ezo ziphumo zingcono. Cwangcisa injongo kwaye siza kukuxelela indlela yokufika apho.
Bakhokele Ngokucofa nje elinye
Google Ads Audit lwethu Google Ads Audit likuvumela ukuba uphumeze zonke iingcebiso ngokuzenzekelayo ngonqakrazo nje. Uyakwazi ukwandisa nokunciphisa iibhidi, wenze amaphulo amatsha, iintengiso kunye nezandiso zentengiso, kwaye uhlaziye ukujolisa kwakho. Konke ngaphandle kokungena kujongano lweeNtengiso zikaGoogle, ngqo Google Ads Audit .
Uhlalutyo lwethu Google Ads kunokuba liqabane lakho lentengiso elitsha. Thatha esi Google Ads epokothweni ukuze amaphulo akho abe phantsi kolawulo lwakho. Njengoko usazi, Google Ads yexesha elinye, kuya kufuneka wakhe umkhwa wokujikeleza kwaye uhlale ujonge ukusebenza kwephulo lakho. UGoogle ucebisa ukuba enze nzulu Google Ads ubuncinci kube kanye okanye kabini ngenyanga.
Kufuneka-wenze noun ngenyanga
Ngophicotho lwethu olunamandla Google Ads Audit , awuyi kufuna ukukhumbula ukwenza njalo. Siza kukukhumbuza ukuba wenze uhlalutyo lweeNtengiso zikaGoogle rhoqo, ke konke okufuneka ukwenze kukungena kwiqonga kwaye wenze uhlalutyo lweeNtengiso zikaGoogle ngonqakrazo olunye. Emva koko uya kufumana uluhlu olupheleleyo lweengcebiso zeNtengiso zikaGoogle kunye neengcebiso ezilungelelaniswe ngokwefuthe elinokubakho kwimikhankaso yakho. Sincoma ukuba uphonononge iingcebiso ezinefuthe eliphezulu kuqala, kwaye emva kokuba ufake ezizithandayo, yiya kwezona ziphakathi nezisezantsi.
Kwikhadi lesiphelo ngalinye, uya kufumana ingcebiso ecacisiweyo ngolwazi olongeziweyo malunga nalo ukuze wandise amaphulo akho ngelixa ufunda ngakumbi ngesihloko. Sifuna ukukukhokela ngelixa Google Ads . Uninzi lweengcebiso zilungele ukusetyenziswa oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukuzisebenzisa ngokunqakraza iqhosha.
Ngexesha elizayo xa usenza Google Ads Audit awuyi kuba neengcebiso ezintsha zokuqhubeka nokuphucula amaphulo akho, kodwa uya kuba nakho ukujonga inkqubela phambili yakho xa kuthelekiswa nophicotho-zincwadi lwangaphambili ukuze wazi ngempembelelo yeengcebiso eziphunyeziweyo ndinayo kwimikhankaso yakho.
Ukuba nephulo lakho Google Ads lilungiselelwe kuthatha ixesha kunye nomonde, kodwa akunjalo ukuba unayo le Google Ads Audit njengeqabane lakho kulwaphulo mthetho. Ixesha yimali-yiyo loo nto sikunceda ukuba wandise ixabiso lexesha lakho kunye nembuyekezo kuyo yonke intengiso yedola echithwe.
Kutheni usebenzisa Clever Ads Audit?
Clever Ads siyazingca kwiQabane leNkulumbuso kuGoogle, ukuze uqiniseke ukuba yonke le nkqubo ikhuselekile kwaye ikhuselekile, kwaye siyayihlonipha imfihlo yakho. Sele sincedise ngaphezulu kwamashishini ayi-100,000 ukukhulisa iqhinga lawo Google Ads kunye nokusebenza ngeziphumo ezigqwesileyo.
Siguqule into enzima kunye nokuchitha ixesha, ukuba ibe yinto ekhawulezayo, elula, kunye nesibindi sokuthetha ukuba siyavuya. Uyakwazi "ukudlala" ngeengcebiso ngokungathi ngumdlalo, ukuze ufikelele kumanqaku aphezulu- kunye ne-ROI- ngaphambi kokuba uyiqonde. Lonke eli xesha ufunda ngakumbi ukuze ube sisilumko kwaye ube namava omphathi weshishini kwinkqubo. Ngeentengiso Clever Ads , uya kuhlala uyazi ukuba wenzeni ngokulandelayo njengoko unokuthembela kuthi ngoncedo ngamanyathelo akho alandelayo.
Umbono wethu kukuba naliphi na ishishini lalo naluphi na ubungakanani kunye nohlahlo-lwabiwo mali kufuneka lube nakho ukufikelela kwintengiso kuGoogle. Kungenxa yoko le nto siluphuhlisile olu Google Ads Audit kumashishini amancinci ukuze bakwazi ukukhuphisana ngokulinganayo ngokuchasene nabadlali abakhulu ngohlahlo-lwabiwo mali olubanzi. Ayinamsebenzi nesizathu sokuba ufuna ukuphicotha amaphulo akho: nokuba urhanela ukuba amaphulo akho eentengiso kuGoogle angenza ngcono, okanye ufuna ukukhangela ukuba iarhente yakho yentengiso yenza owona msebenzi mhle, okanye unomdla nje ngayo ukuba umsebenzi wakho onzima iza kuzala amaduna namathokazi, Clever Ads na intlabo yakho.
Ukongeza, iqela lethu leengcali usoloko ekulungele ukukunceda, kwaye ungasoloko uqhagamshelane nabo nayiphi na imibuzo, inkxalabo, isiphakamiso, okanye uncedo ukuze idingahi@cleverads.com
Esinye isibonelelo sokusebenzisa Clever Ads kukuba ungafikelela kwezinye iimveliso ezininzi Clever Ads dashboard, ukuze ukwazi ukudibanisa amandla Google Ads Audit kunye nezinye izixhobo eziza kukunceda ngokuzenzekelayo wenze iintlobo ezintsha zemikhankaso yeNtengiso zikaGoogle, wenze iibhena ezintsha ishishini, okanye ufumane izimvo zamagama aphambili phakathi kwezinye izinto. Isuti yethu in-in-one yezixhobo zeNtengiso zikaGoogle zikulungele ukwenza wonke umsebenzi ngelixa utyala ixesha lakho kwinto onayo, ukuqhuba kunye nokulawula ishishini lakho.
Sinomdla lwakho ukhuseleko data. Hlola yethuumthetho wabucala.
Siza kukucela ukuba ungene kwiakhawunti yakho Google Ads ukuze uyihlalutye kwaye uyiphicothe ukuze sikunike iingcebiso ezizezakho zokufumana uninzi lwephulo lakho. Sithatha ubumfihlo bedatha ngokungathí sina kwaye siqokelela kuphela oko sikufunayo ukuze sikunike elona thuba lihle linokwenzeka.